Nyamavhuvhu 15, 2018 arun
Ukrainian zviremera vanoronga kuziva cryptocurrency sezvo mari twa
Ukraine anogona nokukurumidza kuziva cryptocurrency sezvo kukubatsira zvemari. Ukraine paramende anoronga vachatevedzera pamutemo yemibvunzo kwegore, Sezvinotaurwa nezita Musoro National kuchengetedzeka uye Stock Market Commission rweUkraine Katya Khomaev. The mukuru akataura cryptocurrency sezvo mari chokushandisa, apo tikacherechedza kuti hazvigoni anoonekwa somunhu pamutemo nyoro. "Izvi ndizvo zvimwe zvakafanana migove, zvisungo, wevimbiso manotsi. Tinoronga kupa chepamutemo kuziva cryptocurrency sezvo kukubatsira zvemari uye kubvumira vanhu kuti mari mariri uye vanoshandisa zvishandiso izvi zvemari.”
Akati kuti Swiss, Maltese uye Gibraltarian zviremera vanoomerera chete “zvemari twa” tsananguro. Maererano Khromaev, Kiev vanofanira kusika akanaka ezvinhu pakuumba mashoko cryptocurrency pamusika uyewo. wo, Iye anoona zvakakodzera kuisa mitero iri cryptocurrency uye simba zvimwe kushandiswa masangano waidzora bhora ichi.
Mameseji hofori AZVAKAITIKA anotangazve $ 10M chiratidzo asingashumbi Fund
Japanese mameseji Zirume ZVINOKOSHA wakatanga kurwisa chiratidzo raaiita mari ine kuzvipira guru $10 miriyoni Via dzayo chikamu achangobva yakasimbiswa rinonzi Unblock Ventures. The mhindu pachena akasimba vakati ndehwokuti vanopedzisira blockchain startups mukuedza vavandudze muzvigadzirwa budiriro.
boka INORATIDZA wakati anotarisira kuwedzera yaipedzerwa pakati pavane mune ramangwana kwakavakirwa kukura blockchain indasitiri. Yanhasi kanda anouya 1 mwedzi pashure pacho akatanga kushanda kwayo cryptocurrency wokutengesera papuratifomu, Bitbox. Kubva ZVINOKOSHA raMwari Website “By nezvekutanga ichi chepamusoro chiratidzo mari itsva, ZVINOKOSHA ari aiming kuti rinowedzera kukura uye kugamuchirwa cryptocurrencies uye blockchain michina. Zvazvakadaro, ZVINOKOSHA mumwe wokutanga vakatenga pachena makambani kuti formalize chiratidzo upfumi kuburikidza chepamusoro mari.”
Kraken Daily Market Mushumo 14.08.2018
$222M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Jo Hodor anoti:
Nyamavhuvhu 29, 2018 pa 8:48 AM
Qiana Vessels anoti:
Gunyana 4, 2018 pa 4:33 PM